पुराना दिन सम्झँदै ओलीले भने- सुखानीमा मारिनेमा म पनि पर्नसक्थेँ - Web Tv Khabar
भाद्र २९, २०७८ मंगलवार १५:४३ बजे
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालले एमाले अध्यक्ष पद नभेटेपछि पार्टी छोडेर हिँडेको दाबी गरेका छन् । एमाले झापाले मंगलबार बिर्तामोडमा आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्ताे बताएका हुन् ।
‘पद पाइनँ भने पार्टी छोड्छु अरे ! के भन्या त्यस्तो ?,’ उनले माधव नेपालप्रति कटाक्ष गर्दै भने, ‘माधव नेपालले के भन्या त्यस्तो ? जनता, कार्यकर्ताले सुने भने के भन्छन् ? सहिद परिवार र योद्धाको रगतले के भन्छ ?’
उनले आफूले कहिल्यै पनि पदका लगि नलडेको र देशका लागि काम गरेको दाबी गरेका छन् । ‘म झापा आन्दोलनमा मारिनँ सक्थेँ । सुखानीको जंगलमा मारिनेमा म पनि पर्थें । माधव नेपालचाहिँ मलाई पद चाहियो, मलाई पद चाहियो भन्छन्, के भन्या त्यस्तो ?,’ ओलीले भने, ‘अहिलेको सरकार अदालतको परमादेशले बनेको हो । जनमतले नबनेको यो सरकार निर्वाचनमा जाउँ भन्दा थुरुरु काम्छ । एमाले फुटाउनकै लागि यो सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।’
सभामुख अग्नि सापकोटाले दलहरूलाई पक्षपाती व्यवहार गरेका कारण एमालेले संसद् अवरोध गरेको ओलीले बताए ।